Njalo ebusika, iqhwa yahlatshwa kusukela ophahleni, iba imbangela yale nhlekelele, futhi ngezinye izikhathi izingozi. Yena elimaza abantu umonakalo impahla. Lokhu kungase kungagwenywa uma abanikazi isakhiwo ozifakile esitobhini ophahleni iqhwa.
Basic isakhiwo snegostoporov
Ukufakwa iqhwa unogada akudingeki kuphela ngemva kokukhetha isakhiwo efanelekayo. Phakathi kwezinye zezinto eziphilayo bungabonakala igridi esesikhundleni ifomu isandla zigxilé izisekelo ophahleni, elise phakathi kwabo egumbini ngehele. imiklamo ezinjalo ekhiqizwa kusuka emakhoneni elingunxande, kanye amapayipi kanye ozimele. Njengoba okhulisa aphume ashone crossmember. Uma kudingekile ukunwebeka izakhiwo ukubumbana kudingeka kwesigaba emifushane.
Isithwathwa stop ophahleni, izinhlobo zazo achazwe kulo magazini kungenzeka ukuthi ijabulise. Kulesi hlobo Abakaki be eqondiswa ikesi noma ophahleni semishayweni. Ngabo, ipayipi lensimbi sidlulile. Kuye ibanga phakathi amapayipi kanye isikhala phakathi ipayipi ephansi futhi ophahleni, kuyoba uzimisele olukwaziyo ubambe isisindo iqhwa, kule divayisi. Uma ukuthi kumelwe kube namandla kakhulu ezaziwayo, amandla kungathuthukiswa ukunciphisa ibanga phakathi amashubhu.
Isithwathwa stop ophahleni, izinhlobo zazo zingase zishintshe kakhulu, kumele ngokulinganayo ukusabalalisa umthwalo iqhwa phezu kophahla. Endabeni snegostoporami ijabulise ukufakwa yabo kumele kwenziwe phezu umthwalo esindayo odongeni umugqa.
Izici snegostoporov ngesimo izingwegwe namakhona, kanye ipuleti imiklamo
Snegostopy-izingwegwe kukhona izingwegwe ukuthi ngeke ubambe e umthamo omkhulu iqhwa, ngakho Site uphahla nge yokuhlanza njalo. Basuke sikhethelwe izakhiwo nezimo okuyinto lihambisana ezimise okwama-tile noma yimuphi omunye izinto ezifanayo. Ngokuvamile iqhwa stop ngesimo izingwegwe ezisetshenziswa njengeziwusizo adjunct kwamanye amadivayisi we injongo efanayo.
Ukufakwa iqhwa onogada ngezandla zabo kungenzeka kwenziwe yimuphi handyman, kungekho ipuleti noma umklamo yomumo ukuthi enze umsebenzi wabo on metal uphahla, kanye ezakhiwe ngensimbi lashukumisa noma evrocherepitsy. Zenziwa ukwaziswa okufanayo njengoba isembozo ophahleni, kungashiwo ngokuthi inzuzo, kanti abasakwazi ukubamba semali iqhwa - it is a lokususa.
Umthengi izibuyekezo mayelana izici of Ukukhetha iqhwa unogada
Umkhawulo emthambekeni engela ukuze ezithambile ophahleni isigubungelo akukwazi ezingaphezu kuka-15 °, ophahleni ezifana flat kuyingozi kangaka iqhwa uzwane nabo ngempela ezingavamile. Lokhu kubonisa ukuthi ukufakwa iqhwa onogada kuleli cala hhayi kungase kube nzima kakhulu. Phakathi kwezinye izinto, isizathu esishukumisayo ukunciphisa amandla snegostoporov kuphuma maholoholo enamathela esithambile. Njengoba abathengi abathi: ngaphezu kuka-kungaba ebusweni anolaka, i-engeli emthambekeni lincane, ngakho-ke, ingozi iqhwa Kuhlangana incipha.
Ukufakwa iqhwa unogada ephelezelwa uquqaba izinzuzo. Lezi zakhiwo, njengoba kugcizelelwe abasebenzisi, unikeze ukuncibilika iyunifomu kwezulu. Izikhukhula zeqhwa ezintabeni ze cishe abusa, phakathi kwezinye izinto, umthwalo kwezulu oqinile kahle yasakazwa kulo lonke endaweni. Uma sikhuluma amaphutha, abanayo lezi zakhiwo. Kepha uma kwaphulwa amanye ingxenye ophahleni uzobe ezilimele ngesikhathi Uzalo zeqhwa, esitobhini iqhwa efakiwe akufanele ngokomsebenzi engiwenzayo.
iqhwa unogada entabeni ubuchwepheshe
Ngo okunezinhlobonhlobo esikhulu ezitolo namuhla wethulwa stop ophahleni iqhwa, ikakhulukazi ukufakwa zalezi zakhiwo uzobe ngenzasi. Nokho, uma ungaqiniseki ukuthi ungakwazi ukusingatha umsebenzi wena, kungcono ukuxhumana ochwepheshe. Ngokwesibonelo, izingwegwe kumele isetshenziswe kuphela at the stage of kweqa, kodwa hhayi ngemuva kwalokho. Umklamo eqala nenkanuko edlulele by enamathela, kungenjalo uhlelo ngeke ukwazi ukugcina iqhwa. Uma uyikha phezulu le ophelele owenziwa nguJesu izingwegwe kungukuthi efakwe njengenhlangano isidingo olwengeziwe ukuze sifeze ukufulela zikusakaza.
Sebenza kungcono ukuklama at the stage of kwakhiwa isakhiwo noma inqubo ukulungiswa ezedlulayo nophahla. Uma unquma ukuba afeze ukufakwa iqhwa onogada ngoba amathayili metal, isixazululo esingcono kakhulu kuyoba isakhiwo eheleni: le ndlela iphumelela kakhulu futhi elula. uhlelo afana nalawa abengeke abe uyakwazi ukuzibamba snegostopora izingcezu ice neqhwa. isithiyo Slatted sibhekane ngokuphumelelayo iqhwa elisindayo, lapho ukukhetha izingxenye kwesokudla. Ukusebenzisa phezulu ukwesekwa noma pribivnye izakhi, grate metal kumele efakwe ngqo emaphethelweni ophahla. ophahleni isigubungelo akubalulekile, ukufakwa snegostopora kungenzeka lolu hlobo kunoma iyiphi ophahleni.
Izincomo ukufakwa ochwepheshe
Izici ukufakwa iqhwa onogada zisengaphansi yokuthi ezisekelweni ukumiswa kukhona izingwegwe angadingi screwing. Bayobizwa zigxilé likhreyithi, kuyilapho pribivnye amabombo efakwe emishayweni, kaningi kwenziwa phezu kophahla esithambile. Uma kuziwa iqhwa unogada ipuleti, zingabantu version isabelomali, nakuba eyenziwe efanayo ngezinto zawo ezibonakalayo ukuze ukufulela. Esinokwethenjelwa yokuvikela idatha usebenzisa amadivaysi engabizi ngeke sifinyelele, phakathi kwezinye izinto, ukusetshenziswa kwazo ophahleni, kumpambuko idlula 30 °, ngokungadingekile.
Ukufaka isakhiwo ijabulise
Ukufakwa iqhwa onogada ijabulise design inikeza ukusebenza algorithm ethile, usikisela yomdwebo, okuyinto izofakwa kwi kubakaki ukwesekwa. Kulokhu, kufanele usebenzise Punch ngawo uzokwazi yakha umgodi, bamisa ngezikulufo. I izimbobo ubakaki abethela ipayipi iqhwa umnikazi. Ukuze wenze obuphelele efanelekayo, amalunga akuhlanganisileyo, ngaleyo ndlela kubalulekile ukusebenzisa crimp eyodwa emaceleni. Emalungeni ziyaqiniswa ngu bolting. izenzo ezifanayo kufanele sigcwaliswe ohlangothini ngalunye emhlabeni azungezwe lesi sakhiwo. Ekupheleni uxhumano aboshelwe uyahlolwa.
Faka kweqhwa unogada phezu ukufulela lensimbi kanye decking
Uma ukufaka kweqhwa onogada izobanjelwa e-ezinengilazi oshiwo ngenhla, kubalulekile ukwakha ebiyelwe efakwe ikesi yenethiwekhi. nenkanuko edlulele yabo iqhutshwa kuze kube sekupheleni, ngenxa yalokhu kufanele usebenzise nezikulufi 8x50 mm. Ukuze unikeze ephakeme ukuminyana nokwethembeka iziqobosho, izimbobo kufanele kokuvalelwa zenjoloba. Ibanga elilungile phakathi Ukubophezeleka kufanele kukhethwe kuye ukuthambekela emthambekeni kanye nobude. Lokhu ipharamitha ziyahlukahluka kusuka 0.5 kuya 1 m.
Ukufakwa iqhwa onogada ngezandla zabo kungenziwa iqhutshwe ophahleni ukuma umphetho. Ukuze wenze lokhu, setha isici esiphikisayo, nabalindi iqhwa unamathele base besebenzisa imishudo olunezinhlangothi nge Ubukhulu 8x25 mm. Ukubeka kufanele afakwe ezindaweni lapho likhreyithi siqinile.
Njengoba lola iketango isaha: izici inqubo
Kwesisindo uhlelo "ebulawa indlala yokudla" - imiphumela kungabonwa ngokushesha!
Jeans nebhulukwe - I-sabasincane imfashini